रोशीमा बृहत रोशी कृषक सम्मेलन सम्पन्न – Radio Roshi
रोशीमा बृहत रोशी कृषक सम्मेलन सम्पन्न
जिल्लाको रोशी गाँउपालीकामा रोशी कृषक सञ्जालद्धारा ऐतिहासिक बृहत रोशी कृषक सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । रोशी गाँउपालीकाको आयोजनामा “कृषि पेशा सबै भन्दा माथि, रोशी कृषक सञ्जाल कृषकको साथी” भन्ने मुलनाराका साथ रोशीको मंगलटारमा उक्त कार्यक्रममा भएको हो । रोशी गाँउपालीकाको “समृद्ध रोशी” को सपनालाई साकार पार्न कृषि क्षेत्रमा देखिएका अवसर, चुनौति तथा सम्भावनालाई सबै सरोकारवालाहरु समक्ष पु¥याइ समाधानको उपायहरु खोजी गर्ने उद्देश्यका साथ उक्त कार्यक्रम गरिएको हो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रतिनिधि सभा सदस्य सांसद गंगा बहादुर दोङले कृषि पेशामा मन लगाउने हो भने समृद्ध हुन समय नलाग्ने बताएका छन् । हामी संग पर्याप्त श्रोत साधन हुँदा हुँदै पनि जोश जाँगर र परामर्श नभएका कारण केहि गर्न नसकेको बताएका छन् । “हामीले खाने प्राय बस्तु विदेशबाट आयात हुने गर्छ, त्यसैका कारण आहिले बजारमा महंगी बढेको छ । यो समस्यालाई मध्यनजर गर्दै हामी कृषकहरुले भएका स्रोत साधनको सही सदुपयोग गर्न सकेमा समृद्ध हाँसिल गर्न समय लाग्दैन” भने ।
कार्यक्रममा रोशी क्षेत्रमा विकास, सम्भावना र आवश्यताको बिषयमा डा. मुक्त सिं तामाङ र अन्य सरोकारवाला संध संस्थाले आ–आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा सभापति कृष्ण बहादुर काल्तान, बिशेष अतिथि निवर्तमान संविधान सभा सदस्य तिर्थ लामा, अतिथि जिल्ला भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा केन्द्र प्रमुख डा. मोगल शाह, रोशी गाँउपालीका कृषि तथा पशु शाखा प्रमुख रघुनी शाह लगायत अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरुको सहभागीता रहेको थियो ।